WARARKII UGU DAMBEEYEY-Xaaladda Deegaanka Tukaraq iyo Ciidamada Isku Horfadhiya.
Xaaladda deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa ah mid degan iyadoona ay halkaasi isku horfadhiyaan ciidanka difaaca dowladda Puntland iyo kuwa maamul goboleedka Soomaaliland oo hab sharci darro ah halkaasi ku qabsaday 8dii January.
Ciidanka difaaca ee dowladda Puntland oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah ee difaaca xuduudaha Putland ayaa diyaar u ah inay ka hortagaan cidkasta oo kusoo xad gudubta xuduudaha Puntland, inkastoo dowladda Puntland ay marar badan ka dhowrsanaysay dhiig ku daata gudaha wadanka.
Madaxweynaha dowladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dhowaan shaaca ia qaaday in dowladda Puntland aysan cidna gorgortan kula geli doonin ilaalinta xuduudeheeda, isagoona shacabka ugu baaqay inay ka qayb qaataan lashaqaynta ciidanka.
Ciidanka maamulka Soomaaliland ayaa deegaanka Tukaraq duulaan ku soo qaaday 8dii January xilligaasi oo uu Garoowe ku sugnaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasi oo sababtay in Puntland aysan xilligaasi jawaab ka bixin dagaalka.
Maamulka Hargeysa ayaa diidey in deegamo katirsan Sool iyo Sanaaag ay booqdaan khuburo caalami ah oo qiimayn ku sameeya deegaamo marar badan dagaal kadhacay si ay u helaan xogta dhabta ah maadaama ay ka cabsi qabaan in la ogaado rabitaanka shacabka kunoo deegaamadaasi.